KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Ciidamo gaar ah oo loo diyaariyay inay la wareegaan amaanka Caasimada
Thursday 31 January 2013 13:44
Ciidamo gaar ah oo loo diyaariyay inay la wareegaan amaanka Caasimada
Muqdisho (KON) Dowlada Soomaaliya ayaa sheegtay in la diyaariyay ciidamo gaar ah oo suga amaanka caasimada Soomaaliya kuwaasi oo mardhow sitoos ah u howlgali doona.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in ciidamadaan ay yihiin kuwo ka badan ilaa iyo 1000,(Kun) Askari oo si gaar ah loo diyaariyay.
Wuxuu sheegay in ciidamadaasi oo haatan diyaar ah ay si toos ah u howlgali doonaan bisha sadaxaad ee Sanadkaan, isla markaana ay si toos ah ula wareegi doonaan amaanka caasimada Soomaaliya.
“ciidamadaan ma ahan kuwo lagu bixinayo dhaqaale ka yimid wadanka dibadiisa, laakiin waxaa lagu bixinayaa dhaqaale ka yimaaday wadanka gudihiisa.”sidaasi waxaa yiri madaxweynaha Soomaaliya.
Amaanka magaalada Caasimada Soomaaliya ayaa ah mid soo hagaagaya xiligaan, waxaana haatan la arkayaa ciidamo xiliyada habeenkii ah jooga wadooyinka oo sugaya amaanka magaalada.